နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ဘို့လုပျထုံးလုပျနညျး - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
အဆိုပါ Lex Artifex ဥပဒေရုံးကသူတို့ Intellectual Property ကာကွယ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုဖို့ IPR Helpdesk မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် (အိုင်ပီ) နှင့်၎င်းတို့၏ Intellectual Property ခငြ့်အရေးပြဋ္ဌာန်း (IPR) နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သို့မဟုတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာသည့်အခါ. ဒါကထုတ်ဝေနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြ.
တစ်ဦးကနိုင်ဂျီးရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိရိယာဖြစ်ပါသည်, အမှတ်တံဆိပ်, ဉီးတည်ချက်, တံဆိပ်, လက်မှတ်, နာမတျောကို, လက်မှတ်, စကားလုံး, အက္ခရာ, ဂဏန်းအက္ခရာ, ဒါမှမဟုတ် သိ. မဆိုပေါင်းစပ်တရားဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်, မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဒီဇိုင်းများ Registry ကို, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပညာဌာန, စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုယ်စားပြုနှင့်စီးပွားရေး၏တူညီသောအညီသူတစ်ပါး၏သူတို့အားတပါတီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီထံမှကုန်ပစ္စည်းများ၏အရင်းအမြစ်ကွဲပြားခြားနားသွားအဖြစ်.
မှတ်ပုံတင်ခြင်း vis တစ် vis ဒါမှတ်ပုံတင်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အတန်း user ကနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအသုံးပြုခြင်းဖို့သီးသန့်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်.
1. အဆိုပါကျောင်းအုပ်ကြီး / အေးဂျင့်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအသိအမှတ်ပြုအေးဂျင့်မှတဆင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် file ရန်ရှိသည်မယ်လို့, မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဒီဇိုင်းများ Registry ကို, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေပညာဌာန, စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာန, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု.
2. registry ကိုအတူတစ်ဦးကပဏာမရှာဖွေရေးတစ်ခုရှိပြီးသားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမှတ်အသားဆိုင်းငံ့မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဆည်းကပ်သည့်အမှတ်အသား၏ non-ပဋိပက္ခအတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်သည်. အဆိုပါပဏာမရှာဖွေရေးနှစ်ခုအတွင်းပြုမိပါလိမ့်မည် (2) အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း.
3. ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်များအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်သည်အဘယ်မှာရှိ, လက်ခံမှုတစ်ခုစာ / အသိပေးစာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်.
4. အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်နိုင်ဂျီးရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပြီးနှစ်ဦး၏တစ်ဦးကာလအဘို့အတိုက်အခံရန်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် (2) ကြော်ငြာသည့် နေ့မှစ. လအတွင်း.
5. ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးရန်မကန့်ကွက်သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်းရရှိခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမကန့်ကွက်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေတယ်ဆိုရင်, မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်မှတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရကြလိမ့်မည်. အဆိုပါမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်မှတ်ပုံတင်ကနဦးပုံစံတင်ပို့ရန်၏နေ့စွဲရပါလိမ့်မယ်.
တစ်ဦးကကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားနိုင်ပါတယ် (အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်) အရောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရောင် format နဲ့. သို့သျောလညျး, အထဲတွင်ပါလျှင် တစ်ဦး အရောင်ပုံစံ, ကာကွယ်မှုသာအရောင်ကန့်သတ်ခံရကြလိမ့်မည်. ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် (အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်), မှတ်ပုံတင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တင်ဆက်မှုအပေါငျးတို့သအရောင်များမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမတတ်နိုင်ကြမည်.
ပထမဦးဆုံးအ-to-file ကိုအုပ်ချုပ်မှုကိုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်မူပိုင်မှတ်ပုံတင်ဘို့ကြီးသောအရေးပါမှုသည်. နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော applications များတူညီသို့မဟုတ်အလားတူရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုသာပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ဘို့အရေးကြီးပုံကိုပေးတော်မူလတံ့.
ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်း၏နာမ၌မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထဲကဒီကဗျာများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာခုံရုံးမှလျှောက်လွှာနှင့်အတူသငျသညျကိုကူညီနိုငျ, သင်ရှည်လျားသည့်အမှတ်အသားနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်း transacted နှင့်အတူတူပင်အားဖြင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူသိများသောမြေပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်ချင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်နီးစပ်သူဖြစ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုကသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ.
နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏မှတ်ပုံတင်ကြာချိန်သုံးဖြစ်ပါတယ် (3) ပျမ်းမျှအပေါ်လအတွင်း.
နိုင်ဂျီးရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခုနစ်ယောက်ကနဦးတရားဝင်မှုကာလရှိပါတယ် (7) နှစ်ပေါင်း, နှင့်၎င်းနောက်, ဆယ်ဘို့အသတ်မရှိပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ (14) နှစ်ပေါင်း. သက်တမ်းတိုးဘို့ application တစ်ခုမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာသုံးထက်လုပ်ရပါမည် (3) ယင်းကြောင့်နေ့မှလအတွင်း.
အမှတ်အသားတစ်ခုအဘို့အလို့ငှာ (တစ်ဦးလက်မှတ်ကုန်သွယ်မှုအမှတ်အသားထက်အခြား) ယင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်မည်၏အပိုင်းတစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ကြေးဖြစ်, ကမဆံ့သို့မဟုတ်အောက်ပါမရှိမဖြစ်အထူးသဖြင့်အနည်းဆုံးတဦးတည်း၏ရှိရေးရမယ်:
1. ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်, တစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတခု, အထူးသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ထုံးစံ၌ကိုယ်စားပြု;
4. ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုမရှိတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းရှိခြင်းတစ်ဦးကစကားလုံးသို့မဟုတ်စကားလုံးများကို, နှင့်၎င်း၏သာမန်ရည်ညွှန်းဖို့ပထဝီအမည်သို့မဟုတ်တစ်ဦးအမည်သစ်ကိုရသောအညီမ;
သမ်မာကမျြးအဖြစ်များသည့်အင်္ဂလိပ်စကားများဖြစ်ကြောင်းအမှတ်အသားများ devices များသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှတ်ပုံတင်စေခြင်းငှါ.
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဖော်ပြရန်မဖြစ်ရ, နှင့်အများပြည်သူမူဝါဒကသို့မဟုတ်အကျင့်ယိုယွင်းနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားရပါ.
လျှောက်ထားသူ / ကျောင်းအုပ်ကြီးခြောက်လအမည်များကိုမှတက်အဆိုပြုစေခြင်းငှါ, အမှုအတွက်အမည်များကိုမဆိုပယ်ချနေကြသည်.
လျှောက်ထားသူသည်အောက်ပါအသေးစိတျပေးရပါလိမ့်မယ်: ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအပြည့်အဝနာမကိုအမှီ(s ကို), အမျိုးသား, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာ, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓာတ်ပုံ, နှင့်ကုန်စည်၏အတန်းအစားမှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဆည်းကပ်.
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဆည်းကပ် jpeg format နဲ့တစ်ဦးလိုဂို၏ form မှာဖြစ်နိုင်ပါသည် (တနည်း. 120px ထိက x 100px, 1200 dpi).
တစ်ဦးကသီးခြားလျှောက်လွှာအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ပါလိမ့်မည်သည့်အဘို့ကုန်စည်ချင်းစီခွဲခြားဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. နိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရှိကုန်စည်များနိုင်ငံတကာခွဲခြားရေးအောက်ပါအတိုင်း. တစ်ဦးကသီးခြားလျှောက်လွှာအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဖြစ်သောများအတွက်ကုန်စည်ချင်းစီခွဲခြားများအတွက်တင်သွင်းနေသည်.
အဆိုပါ Lex Artifex ဥပဒေရုံးနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်အပေါ်နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်နိုင်ငံတကာ clients များကူညီ. The documents and details required above can be sent to the office via email at lexartifexllp@lexartifexllp.com အောက်ပါနှင့်အတူ:
2. Lex Artifex မှရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power, ရိုးရှင်းစွာလက်မှတ်ရေးထိုး, နာမတျော၏အပြည့်အဝအထူးသဖြင့်အတူ(s ကို), လိပ်စာ(ဤသူကား) နှင့်လျှောက်ထား၏နိုင်ငံသား(s ကို). နာမည်အပြည့်အစုံ(s ကို) နှင့်လျှောက်ထားသူတစ်ဦးအခိုငျအမာ / ကုမ္ပဏီလက်မှတ်ရေးထိုး၏စွမ်းရည်လျှင်.
Please refer to this post on the နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် for the billing arrangement.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် SERVICES ပါဝင်သည်:
Defending အတိုက်အခံ (ရှိလျှင်),
Lex Artifex LLP အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း, မူပိုင်ခွင့်, နှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းများလျှောက်လွှာပြင်ဆင်မှုများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုန်ဆောင်မှုများ. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ IP ကိုရှေ့နေများပါဝင်သည် & ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စီးပွားဖြစ်နှင့်အသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ၏ဘက်တော်သားအတွက်အထူးပြုတဲ့သူရှေ့ရပျ.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံစူးစိုက် IPR အကြံဉာဏ်, ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်, မှာအီးမေးလ်က lexartifexllp@lexartifexllp.com, ခေါ်ဆိုခ +234.803.979.5959. ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်!
Lex Artifex LLP ရဲ့ Intellectual Property အလေ့အကျင့် Group မှ.